Akụkọ - Sistemụ nkwekọ
Anyị bụ kpọmkwem factory nke ụlọ elu kreenu ngwaọrụ mgbochi nkukota.Ngwa kreenụ ụlọ elu bara oke uru maka ọrụ gị iji were ohere.Ngwa mgbochi ọgụ anyị ga-echebe kreenu na ndị na-ebuli elu na kọntaktị na akụrụngwa ma ọ bụ ihe mgbochi ndị ọzọ.
Hazie sistemu gị ka ọ rụọ ọrụ mmepụta na njikwa tupu oge eruo n'ebe dị anya ịchọrọ.
Ngwa mgbochi nkukota na-echekwakwa akụrụngwa kwụ ọtọ.A ga-eme ka mmepụta mkpu ịdọ aka ná ntị ya rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na unit ahụ achọpụta ebumnobi na-agagharị n'ime anya ịdọ aka ná ntị setịpụrụ.Nke ahụ na-enye ndị na-ahụ maka ọrụ gị oge ka ha mee ihe mezie tupu esemokwu dị oke ọnụ emee.
Usoro mgbochi ọgụ bụ ngwaọrụ nchekwa iji zere nkukota nke cranes abụọ ma ọ bụ karịa na-arụ ọrụ n'otu saịtị ọrụ maka otu cranes, achọrọ otu usoro mgbochi ọgụ.nke ọ bụla nwere ihe ngosi, ihe nleba anya, ihe mgbochi, transceivers redio, wdg.
Banyere nrụnye, anyị ga-enye ntuziaka, vidiyo na ntuziaka ntanetị maka enyemaka.Ọ bụrụ na ọ dabara, anyị ga-eziga onye ọrụ nka ka ọ rụọ ọzụzụ injinia ma ọ bụ nrụnye.Mgbe-ire ọrụ bụ anyị mkpa.
Oge nzipu: Ọgọst-13-2021
Mobile Crane Qatar, Ihe ngosipụta oge ibu crane Tower, Nchekwa Ugo elu Tower Crane, Ngosipụta oge ibu, Chọrọ nchekwa nchekwa ụlọ elu crane, Sistemụ nchikota maka ụlọ elu crane,